နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အေဆမ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်များ ကြိုဆိုပွဲနှင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အာရှ - ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက် ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
Fresh Myanmar News Free
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အေဆမ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်များ ကြိုဆိုပွဲနှင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အာရှ - ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်
Postado Tuesday, November 6, 2012 at 6:04 AM
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၅
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် နိုဝင်ဘာ (၅) ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ National Convention Centre, Champa Grand Hall ၌ ကျင်းပသည့် အေဆမ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်များ ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား နှင့် (၉) ကြိမ်မြောက် အာရှ - ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မွန်းလွဲ (၁) နာရီ ( ၁၄) မိနစ်တွင် ခေတ္တတည်းခိုသည့် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ဒေါင်ချန်းဧည့်ဂေဟာမှ အထူးမော်တော်ယဉ်တန်းဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး National Convention Centre ဧည့်ခန်းမသို့ ရောက်ရှိရာ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာကျူမာလီဆိုင်ညဆွန်နှင့် ဇနီး၊ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာသွန်ဆင်းသမာဗောင်နှင့် ဇနီး တို့က လှိုက်လှဲခင်မင်စွာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသော အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ဥရောပကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ တို့နှင့် အတူစုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မသည် အေဆမ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံသစ်များ ဖြစ်သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၊ နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ကို ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် သည်။
ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် ရှေးဦးစွာလာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာသွန်ဆင်းသမာဗောင်က ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H. E. Mr. Sheikh Hasina၊ နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H. E. Mr. Jens Stoltenberg၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသမ္မတ H. E. Madam Eveline Widmer-Schlumpf တို့က မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် (၉)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်များ၊ ၀န်ကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ နှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာသွန်ဆင်း သမာဗောင်နှင့် သမ္မတ မစ္စတာကျူမာလီဆိုင်ညဆွန်တို့က အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် ဥရောပကောင်စီဥက္ကဌ H.E. Mr. Herman Van Rompuy ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Raja Pervais Ashraf ၊ ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဌ H.E. Mr. Jose Manuel Barroso နှင့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mr. Demetris Christofias တို့က မိန့်ခွန်းပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် (၈)ကြိမ်မြောက် အာဆမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Elio Di Rupo က မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
သမ္မတရုံးဆိုဒ်မှ တရားမဝင် ဗြောင်မလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဝေဖန်လိုသည်များ၊ အကြံပေးလိုသည်များ ပေးပို့လိုသည်များ ရှိပါက yawaitun747@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အလားတူ YaWai at facebook, YaWai at twitter များမှလဲ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
နန်းသီရိမောင် ကို သင်သိပါသလား မသိရင် သင်ဇာဝင်ကျော်နဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက အဖော်အချွတ်တွေ ဝတ်လို့ဝေဖန်ခံရတဲ့ ကောင်မလေးကို သင်သိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတဲ့ အ...
ဖင်ပေးကောင်းတဲ့ မမ (သို့) ရွှေစင်
ဖင်ပေးကောင်းတဲ့ မမ (သို့) ရွှေစင် မြန်မာမော်ဒယ် ရွှေစင် မကြီးကြီးအောင် လုပ်ပေးနေတယ် သူ့ကိုယ်သူတော့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင် ...
Sexy မမတို့ရဲ့ ပုရိသအကြိုက် သင်္ကြန်ဖက်ရှင်
သင်္ကြန်ဖက်ရှင်သည် Sexy ကိုပဲ ကိုစားပြုလေသလော။ ကျွန်တော်တို့ ဘလော်ဂါများ ဓာတ်ပံ...
သဉ္ဇာတို့ မတင် ဘယ်သူတင်မှာလဲ
ဤပုံတွေကို ကြည့်ပါ။ မည်သူမျှ အလှရိုက်ပေးထားခြင်း မဟုတ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ရိုက်ထားကြတာပါ။ ဒီပုံတွေ အွန်လိုင်း ပြန့်လာတဲ့ အ...
ပေါက်တောစမ်းသပ်လူစာရင်းကောက်ခံရာ၌ ရိုဟင်ဂျာဟုထည့်သွင်းရန် ဘင်္ဂလီများက တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများနေထိုင်ရာ ဘင်္ဂလီကျေးရွာ များ၌ နိုဝင်ဘာ ပထမအပတ်အတွင်းက ဘင်္ဂလီ လူဦးရေ စာရင်း ကောက် ခံ ရာတွင် ရို...
ဦးဇင်ဝိုင်းက သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို လက်တလော ကားရိုင်ခွင့် ပိတ်မည်မဟုတ်
သင်္ကြန်တွင်းတုန်းက ပုံ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်းမှ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်၏ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုနှင့် အနေအထိ...
Sexy သင်္ကြန်မှ Sexy မမ များ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အတာသင်္ကြန်ကို ဆင်နွှဲနေကြသော မြန်မာမလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကျွန်တော် ထိုပုံများတွင်ရှာကြည့်...
YaWai(ပိုင်စိုးသူ). Powered by Blogger.
မြန်မာ SEXY Model လေးများ
မြန်မာ SEXY MODEL လေးတွေထဲမှာတော့ သူတို့ အလှဆုံးပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ် ဟီဟိ။ ကြံကြံဖန်ဖန် ရိုက်လဲ ရိုက်တတ်ပါပေ့ဗျာ။
သင်္ကြန်၊ Celebrites နှင့် SEXY များ
သဉ္ဖာကတော့ ထိန်းလို့ကို မရတော့ဘူး။ ရဲလေးကတော့ စော်နှစ်ပွေနဲ့နော်။ သင်္ကြန်မှာ မီဒီယာများကို သတိထားပါလို့ ကိုကို မမ sexy များကို ...
စာနယ်ဇင်းသမားများ အကျဉ်းချထားသည့် စာရင်း၌ မြန်မာမပါဝင်တော့
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်ခါ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စာနယ်ဇင်းသမား များအား ထောင်ချ ထားသော နိုင်ငံများ စာရင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဝင်တော့သည်ကို တွေ့ရသည...
Copyright © 2012 YaWai (ပိုင်စိုးသူ). All Rights Reserved.
Xhilaration theme by Dreamweaver. Converted by O Pregador sponsored by O Pregador.